လိင်ကိစ္စအထူးစိတ်ဝင်စားသော ဇာဂနာ ~ Myanmar Express
လူရွှင်တော်ဇာဂနာနှင့် မြန်မာရုပ်ရှင်မင်းသမီး နှင်းဝတ်ရည်သောင်းတို့ မအိပ်စက်ခင်ကုတင်ရှေ့အမှတ်တရFrom : ဆင်ပေါက်ဇနီးမယား ရှိပါလျက်နှင့် ဆန္ဒကို သိက္ခာဖြင့်မထိန်းသိမ်းနိုင်သော လူရွှင်တော် လူပျက်ဇာဂနာတစ်ယောက် လန်ဒန်မြို့တွင် မြန်မာရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ဖူးသော မင်းသမီးနှင်းဝတ်ရည်သောင်းနှင့်အတူဟိုတယ်တစ်ခုတွင် တစ်ညတာ အတူတကွ အိပ်စက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။အသက်အရွယ်ကြီးမားလာသော်လည်း ဘုရား၊တရားမှန်းမသိ ကံငါးပါးဆိုတာကို မသိ အဖွားကြီးဒေါ်စုကြည်နောက်ကို လိုက်ကာ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေလျက်ရှိသည်။အမေလာပြီ ငွေပါသည် ဟူသော စကားအတိုင်း ဇာဂနာတစ်ယောက် အဆိုပါကိစ္စရပ်များ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန်ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။Myanmar Express
Posted in: ဘာသာပြောင်းမည်ဆိုသော လူပျက် ဇာဂနာ
28 June 2012 13:17
Yes ,His friend Aung Din [Burma Campaign USA ]also destroiedamarried woman [ Wah Wah in Las Vegas }. Zargana and Aung Din are same habit not good men.Becareful.........
29 June 2012 11:13
ေ-ာက် ဂတုံး ၊ ချီးဂတုံး ၊ ကြာကူလီ ၊ေ-ွးမျိုး၊ -က်မြေး၊ ကျက်သတုံးကောင်၊ အမျိုးယုတ်
ကုလားအချင်း အိပ်တာ အိပ်ပါစေ
29 June 2012 22:31
ဘ ယ် ပာာကို ယုံ ရ မှာ လဲ ။ မ ပာု တ် က ပာု တ် ကတွေ လား။ အ မှ န်တွေ လား ရှု ပ်နေ တာပဲ......
သူတောင်းစားထမင်းဝတော့ ဟှဝါ တောင်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ တောင်လားမတောင်လားတော့ မသိ သူ့ မိန်းမ နဲ့သမီးတော့ အမေ၇ိကားမှာ အလုပ်ဖြစ်လို့ ။ အပြင်းပြေ မ၇ီးနဲ့ နှစ်ပါးသွား။ ခွက်လုင်....
2 July 2012 14:11
ဇာနဂါကဘာလဲဟ ရှေ့ဆောင်နွားလားဖြောင့်ဖြောင့်သွားတော့ နောက်ကနွားတွေဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်ဆိုတဲ့စကားနဲအညီလိုက်လုပ်နေတာလား.....ဟားးးးးးးးးးးးးးဟားးးးးးးးးးးးးးးရီချင်ပါ့ပေ့နိုင်ငံခေါင်းရှောင်ကြီးတွေရယ်။
ငါကတော့၇ှင်းတယ် နဂိုကကြိုက်တယ် ကုလားခံ၇တောအသံထွက်လာပြီး ၇ခိုင်တွေထိတော့ကြည့်နေတဲ့မိန်းမကြီး ကုလားမယားမကြီးကိုအသေမုန်းတယ်ထွက်သွား ငါတုိ့တိုင်းပြည်က
2 July 2012 20:35
http://www.facebook.com/insultmo ဆောက်ကုလားမုန်း၇င် ဒီpage ကို like လုပ်ကြဆောက်ကုလားမကောင်းကြောင်းအကြောင်းအကုန်ပါတယ်ခွေးသားအလာအကြောင်း
4 July 2012 08:25
He is real Man.
6 July 2012 16:24
စောက်သုံး မကျတဲ့ အကောင်.. ဖွန်ကြောင်.. ဖာခေါင်း...
မှန်ကန်တဲ့ သတင်းတွေဆိုရင်တော့ အား ပေးပါတယ်။ဇော်မင်း
8 July 2012 01:10
Any body writes their own history as they do. you don't need to say about theirself at behind of them. if you are telling the true , it does't matter if not its reflection comming to you as backfire. Take care GUYS
8 July 2012 03:05
တ ရား ဆို တာအား လုံးရှိရ မ ယ်ထ င်တ ယ်
ပြသနာ ကတော့ တကယ် ကို ကြီးနေပြီ ဒီသတင်း တွေ အ မှန်တွေ ဆို ရင် တော့ ဘယ်လို လုပ်ကြ မလဲ ဘယ် လို ဖြေ ရှင်း ကြ မလဲ။ ကု လား တွေ ကို သွား နှိမ့် တာ တော့ မကောင်း ပါ ဘူးနော် ။တိုင်း ပြည် အ တွက် ရင် လေး ပါ တယ်။
11 July 2012 20:18
အာဏာရှိသူ ငွေကြေးချမ်းသာသူ လူသားအကျိူး ပိုပြီးလုပ်နိင်မှာပါ။ ဂျပန်သူဌေးဆီမှာ၂နှစ်အလုပ်မလုပ်ရဘဲလခယူနေရတာကြာတော့ရှက်လါတယ် တစ်နေ့မှာသူဌေးလါတဲ့အခါ ကျွန်တော်ကအလုပ်ထွက်တော့မယ်ပြောတော့ ဘာကြောင့်လဲမေးတယ် ကုမ္မဏီက၀င်ငွေမရှိလို့ ငါလခယူရတာ ရှက်လါလို့ပါပြောတော့ (ဘက)အရှုးသန့်ရှင်းရေးဘဲလုပ်ကွာဆိုပြီး ဆူသွားခဲ့ပါတယ် တစ်နေ့ကုမ္မဏီဘောနက်(စ်)ပေးတဲ့နေ့ ဘိုးလိန်းကစားရုံမှာရှယ်ယာသူဌေးတွေ စုထိုင်နေရာက ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီး မင်းတို့(ဘိရုမာ)ဗမာရဲ့စိက်ဓါတ်တွေ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းသလို ငါတို့(နီဟွန်းဂျင်း)ဂျပန်လူမျိုးတွေ အကြောင်းလဲပြောပြမယ်နော်ဆိုပြီး ငါတို့ကုမ္မဏီလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကြော် (ဥပမာ)တစ်နေ့ကို တစ်သန်းမြတ်ခဲ့တယ် ၁၀နှစ်- ယနေ့တစ်နေ့ကိုတစ်သိန်းရှုံးတာ၂နှစ် အဲဒီလိုရှုံးတာကိုကြည့်ပြီး ကုမ္မဏီကိုပိတ်လိုက်ရင် အလုပ်သမားထောင်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့တဲ့လေ။ ၂၀၀၄ခုနှစ် ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လါပြီး လူသားအကျိူးပြုရန်မီးကုန်ရမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့……..နိုင်ငံရေးငါမသိဘူးကွာ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်အတ္တမရှိဘဲ တကယ့်လက်တွေ့လုပ်နေသူတွေ ပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ကြပါ၊ (ဥပမာ)ယခင်က(ပင်လုံစာချုပ်မှလွတ်လပ်ရေး၊လွတ်လပ်ရေးမှပါတီစုံ)ယခု(လက်တွေ့လုပ်နေသူတွေပေါင်းမှဒီမိုကရေစီ၊ဒီမိုကရေစီမှပါတီစုံ) အားလုံးနည်းနည်းလေးမှားနေသလိုဘဲနော်။ဘာသာတရားဆိုတာ ယုံကြည်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတွက် မျက်လုံးမှိတ်ပြီးမကိုးကွယ်ပါနဲ့ ဘာသာပြောင်းတိုင်းလူမျိုးမပြောင်းနိုင်ပါ။အရီးကြီးခေတ်ဆိုတာ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ငါကိုယ်တိုင်မျိုးမစစ်ပေမဲ့ လူစစ်ဖို့ လူပီသဖို့တော့လိုတယ် အမြဲဆန်းစစ်နေတယ်ကွာ၊တို့ကတာဝန်အရဆိုတဲ့စကား မင်းမိသားစုအတွက်ပါ တိုင်းပြည်အတွက် မဟုက်ပါဘူး ပြန်ဆန်းစစ်ပါအုံးကွာ။ မင်းကောလူသားတွေအတွက် သွားကြားထိုးတံ တန်ဘိုးလောက် လုပ်ပြီးပြီလါး၊ တိုင်းပြည်ဖျက်မဲ့ ငါကဘာကောင် ဘာရာထူးကွ ငါကခေါင်းဆောင်ကွ ဆိုတဲ့ဝေလေလေစုန်းပြူးတွေဖယ်ရှားပြီး လက်တွဲကြပါ၊ကောလဟာလနဲ့ အာချောင်မယ်ဆို ဝေးဝေးနေပေးပါ၊မင်းကတကယ်ဘဲ တာဝန်အရဘဲဖြစ်ဖြစ် မျိုးချစ်စိက်နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ လုပ်မယ်ဆိုရင်(ရှေ့ကသွားရင်အီးမပေါက်နဲ့ နောက်ကလိုက်ရင် ဖိနပ်မနင်းနဲ့ကွာ အရမ်းစိက်ဆိုးတယ်) ငါတို့နိင်ငံက ကမ္ဘာမှာအရမ်းနောက်ကြနေပြီ အချိန်မရှိပါ။ လူသားအကျိူးပြုဂီတဥယျာဉ် (၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈) တာမွေလူမိုက်ကြီး ၀င်းကိုလှိုင် JJ (CLUB) နားမှာနေတယ်………http://www.facebook.com/media/set/?set=a.482823941733642.110392329.100000181218020&type=3&l=a6af18c97d
it is not in front the bed...look at the back..it is in the kitchen...you can see cooking staff...
14 July 2012 20:27
တာမွေလူမိုက်ကြီး ဆိုတဲ့ကောင်လဲ စောက်ရူးပါဘဲကွာ..ခွေးသား..လျှာကိုရှည်တယ်..ကွန်းမင့်ကို ပေရှည်ပြီး ရေးထားတယ်။
18 July 2012 14:59
ဂါဂါ ထိပ်ကြီးက ပြောင်ပီး လဲ့နေတာပဲ ပွတ်လိုက်၇၇င်...ဟင်းးဟင်းးး
နေပါဦး.. မင်း တို့ က NLD တွေ ကို ၀ိုင်း ဖဲ့နေ ကြ တာ လား ကွ...သတ္တိ ရှိ ရင် ကြိုက် တဲ့နေ ရာ ကို ချိန်း လိုက်crazyboy@gmail.com ကို လာ ရှင်း ... ဘော ဘဲ
crazyboy@gmail.comဆိုတဲ့ စောက်ရှူးရေ.. gmail မှာတော့ ချိန်းမနေနဲ့ဖုန်းနံပတ်သာ ပေး .. မအေလိုး.. အပြင်မှာ တွေ့မယ်။တယောက်ချင်းဘဲ။
1 August 2012 21:24
သောက် က တုံး
ကြောက်လို့ သူ၇ှိတဲ့ နေရာကို မပြောပဲ ဂျီမေး အကောက်လာပေးနေတယ်.. သတ္တိ ၇ှိတဲ့ ကောင်ဆို ဘယ်မှာ စောင့်နေတယ်..လာခဲ့လို့ပြောမှာ ..အခု ဟာက ဂျီမေး လာပေးနေတယ်... NLD ကကောင်တွေက အဲ့လိုပဲ ထမိန်ခြားက လက်ဝါး ပြနေတာ.. အခြောက်တွေ.. ဂျီပုန်းတွေ...ဟဟဟဟဟဟားးးး ရီစရာ ကောင်းလိုက်တဲံ NLD
2 August 2012 21:20
6 August 2012 12:33
NLD က ကောင်တွေက ထမိန် ၀တ်ပီး ထမိန်ကြားက အခြောက်တွေလို လက်ဝါး ပြနေတာ... ၇ီ စရာတော့ ကောင်းသား..
10 August 2012 18:16
နှင်းဝတ်ရည်သောင်းပုံစံကြီးက တော်တော်ထန်မဲ့ပုံဘဲ၊ဒါမျိုးကြီးနဲ့ဆို ကျုပ်လည်း လိင်ကိစ္စ စိတ်ဝင်စားတယ်။
NLD က ဖာကောင်းတွေ ပေါ်လာပြီကို
20 August 2012 21:38
ဒါ ဆို ကောင်း တာ ပေါ့ ..ကွ
zar ga nar vs khin khin ei show will come soon Naing Win
14 September 2012 02:40
ထောင်ကျ နေ တုံးက တော့ ဒင်းကို သနားနေ တာတကယ်သာ ဆိုရင် တော့ ပြန်လွှတ်တာမှား တာ ပဲ
15 October 2012 09:59
We know that both of your parents are writers. U Nan Nyunt Swe and Daw Kyi Oo﻿ will shame about your wicked actions on Buddhism. (ဇာဂနာ, you are မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ undisciplined either by mother or by father)
ဇာဂနာနေရာမှာ ခင်းဗျားဆိုရင်ကော.......သဘာဝကို သဘောပေါက်.....
please fill your brain for enough thinking
can you ask myanmar express for all army top brass bad and corruption.i want to see you are army or not.
come to singapore .meet me one by one fighting wiyh you. army mam
1 February 2013 12:05
10 March 2013 01:27
army manနဲ့ one by one တွေ့ တော့ဘာ လုပ် မှာ လဲ နင် ဖင် ခံ ချင် လို့ လား ကောင် မ
26 March 2013 13:28
26 March 2013 13:29
Pa Pa (RASU)
please get out from politicians lives, we did not trust him since 1990.
11 June 2013 00:05